Yintoni uBobber kunye Nokuba Kutheni Abanye Abanikazi Benza?
Ukwenziwe ngokufanelekileyo, i-bobber isithuthuthu esinezinto ezingenasidingo ezisuswe (ezingadingekile kwimbono yomnini) kwaye zibhalwa ngumninimzi-akukho mithetho. Ngelishwa, i-bobbers nayo ingadibanisa kakuhle iibisa zebhayisike ezinokuba yingozi ukukhwela .
Kukho izizathu zokuba umnini anqwenela ukwenza ibhayisikili yakhe ibe yi-bobber: ukhetho lokujonga / isitayela, ukungabikho kwamalungu atshintsho, umonakalo wengozi ... Kodwa naziphi na izizathu, kufuneka azi ukuba ukhuseleko lokuqala kunye nokuphambili.
Ukususwa kwezinto ezisuka kwiisithuthi ze-motorcycle ukulahla umzila wesitrato esingenasidingo (ukuba i-seat seat solo isetyenzisiweyo, umzekelo), ukususa amabakethi esetyenzisiweyo angasetyenziswanga kwisakhelo. Nangakhathaliseki ubungakanani bokuguqulwa, utshintsho ngalunye oluthatha ibhayisikili kude nesitokethi kufuneka luqwalaselwe ngokucophelela.
U-bobber oqhelekileyo uya kuba nokulungiswa okulandelayo:
Abafaki bangaphambili nabasemva bafutshane
Isihlalo sigqityiwe okanye sitshintshiwe
Ama-Mufflers athatyathwa okanye asuswe
Izibane eziqhelekileyo zifakwe
Inkqubo yokuguqula umbala
Bobbers ngokuqhelekileyo baye bancipha. Okukhethwa kukho apha kukunciphisa abafaki abakhoyo okanye ukuthenga izinto ezifakwe kwi-bobber. Kukho ezininzi iinkampani ezithengisa i-bobber style style fenders kwiwebhu, kodwa umthengi kufuneka enze uphando kabini into kunye nenkampani ngaphambi kokuthenga.
Ukuguqula i-fender esele ibenomsebenzi obunjineli obulula, ofuna iifowuni ezimbalwa. Nangona kunjalo, ukuba isithuthuthu siya guqulwa kwisitayela se-bobber ngumzekelo ongaqhelekanga, umnini makaqwalasele ukugcina iindawo zokuqala njengoko oku kungongeza ixabiso elikhulu xa kuthengisa ibhayisikili kwixesha elizayo.
Ngaphandle koko, i-stock fenders ingathengiswa kwaye imali ifakwe kwizinto ezakhiweyo.
Ukucinga ukuba i-fender yasekuqaleni yenziwa kwintsimbi, inxalenye yokuqala yokuguqula igosa kwisigqibo esinqunyiwe. Umnini ngamnye uya kuba nombono wakhe malunga nobude afuna ukuba abafaki bayo, nangona kufuneka acinge ukushiya isinyithi esincinci esithile ukuze avumele ukuba kube neengcambu ezigciniwe ngeteksi yecandelo lezetroniki. Umgca osiweyo kufuneka umakwe ngePalpie® isitayela esihle.
Iingqungquthela zangaphambili ziza kubakho i-fenders zikhutshwe kwaye i-edge edge ishiyiwe. Ngaphandle kwezinto ezibonakalayo zengozi zolu hlobo lokugqibela, ukuba neengcambu ezibukhali kwi-fender akukho mthethweni kumazwe amaninzi-ukulungele ukujonga phambi kokusika (jonga inqaku).
Kukho uninzi lwezinto zokukhethwa kwezinto zokusika. I-hick ejwayelekile yabona nge-blade yezinyo (32 TPI) yindlela ephantsi kakhulu yokusika i-fender, kodwa iya kunqumla ngokuthe ngqo.
Uninzi lwezicucu lungafuneka, ngoko ke, ukufumana ukugqitywa kwerhasi.
I-cutter ye-jigsaw-cutter enegesi enegesi ingasetyenziselwa ukunqumla i-fender. Nangona kunjalo, xa usebenzisa i-cutter ye-jigsaw, kuyinto efanelekileyo yokusebenzisa i-masking tape ukuya ngaphakathi kwinqanaba elinqamlekileyo (kwicandelo le-fender eliya kugcinwa) njengoko abagayi be-jigsaw bavame ukushiya umgca odibeneyo apho bacinezelwa khona isinyithi.
Ukugqitywa kwefender kuya kweyakhethwa ngumnini; Nangona kunjalo, umgca onqabileyo oveliswe yinkqubo yokusika iya kunqumla. Ngoko ke, kubalulekile ukufaka ipeyin kumgca ubuncinane. Ngenye indlela, i-fender ingaxutywa , i- powder yengubo okanye icwecwe ngokupheleleyo.
Isihlalo kwi-bobber yindawo apho abaninzi abaninqwenela ukuvakalisa ukukhetha kwabo. Ngokwesiko, izihlalo ze-bobber apho isihlalo esisodwa sifana nebhodi yomzila wee-racers zakuqala kwee-1900; ukuguqula isihlalo esikhoyo ukuba sibonakale njengenye yezo zihlalo zebhodi zakuqala kunzima. Ingxaki ikhona kwindlela yokwakha kunye nokwakhiwa kwezihlalo zanamhlanje. Uninzi lwezihlalo zee-motorcycle zineziseko zetsimbi, ezi ziseko zineentambo kunye neenkcenkcesho kuzo ukwenza isinyithi esincinci sinamandla.
Ukuba isihlalo sinqunywe kwisitulo sobabini kwisunithi esisigxina, ezinye zezikhwepha zokutshatyalaliswa ziya kulahlekelwa. Ukongezelela, ezininzi izihlalo zineendawo zokufumana iibhanki eziphambili nangaphambili. Ukuba isigaba sangasemva sisuswe, iibakaki ezitsha zokuqala kufuneka zenziwe.
Iinjongo zezakhiwo zeCoberber zenziwe zikhoyo kodwa umnikazi makenze isigqibo sokuba ngaba ubona ixabiso elifanelekileyo.
Ukususa i-mufflers kwakunokuguqulwa kohlobo lwe-bobber.
Nangona kunjalo, ukwandisa amanqanaba omsindo wesitokiselwano ngesithuthuthu akuvumelekanga kwiindawo ezininzi zase-US nakwamanye amazwe. Ukongeza, ukususa i-mufflers kuya kuba nefuthe kwiimeko zokusebenza kweenjini, ngokuqhelekileyo inefuthe lokuxhoma umxube . Injini eqhutyayo iyakhokelela ekugqibeleni kunye nomonakalo omkhulu wangaphakathi. Ukuba umnini ususa ama-mufflers kufuneka abe novavanyo lwevenkile yokuhlola i-carburetor (umxube). Njengokuba ubuncinci kufuneka ahlole umbala weplasg.
Kukho ezininzi iintlobo, izitayela kunye neendlela zokwenza iimoto ezithwala iithuthuthu. Ukuba umnini ufuna ukufaka indawo yokubambisa iimpahla zokubambisa iimpahla, kufuneka aqale azihlole ngenyameko ukuseka iimpembelelo. Ngokomzekelo, ezinye izithuthuthu zine-wiring yazo esebenzayo ngokusebenzisa ii-handlebars. Umnini walolu hlobo lwesigqeba sokubambisa kufuneka ahlole ukuze abone ukuba iitshintshi zingasetyenziselwa ngumbambo wangaphandle.
(Qaphela: Akusiyo into efanelekileyo yokubamba i-handmarks emva kwe-markmark ukuze kuvumeleke ukuba i-wiring yangaphakathi njengoko inokuchaphazela kakhulu ingqibelelo yesakhiwo semivalo).
Ngaphandle kokutshintsha kombane kunye nokucutshungulwa kweembambo ezixhunyiwe kwi-barbar replacement, umninimzi kufuneka aqwalasele iicandelo ezahlukeneyo: phambi kokuqhekeza, ukuxhoma kunye ne-throttle. Iikhowudi zobude obuhlukeneyo ziyafumaneka ngokukodwa ukwenza okanye imodeli, okanye njengendawo yokubuyisela indawo. Ngaphambi kokutshintsha i-handlebars, umnini kufuneka aphande abaphakeli be-postmarket ukuba babone ukuba iifayili ziyafumaneka kwibhayisikili yakhe.
Izibane eziqhelekileyo zifumaneka kwimithombo emininzi: i-intanethi, izitolo zokufikelela kwii-motorcycle, izitolo ze-auto accessory njll. Nangona kunjalo, umnini kufuneka aqinisekise ukuba akafaki izibane ezininzi ngeemfuno eziphezulu zamanzi njengoko oku kukhulula ibhetri ibhetri. Okwangoku iyakuthandwa, nangona ingekho imbali echanekileyo kwi-bobber, izibane ze-LED. Ezi zibane zifumaneka kwiinkqubo ezininzi kwaye zivame ukuba nezidingo zamandla aphantsi.
Ukutshintsha umbala we-tank yithuthuthu, abafaki, kunye neepaneli zecala zilula. Ukuba umnini akakwazi ukupenda okanye ukutshiza, okanye akanalo izakhiwo, ivenkile yesithethe (imoto okanye isithuthuthu) ngokuqhelekileyo uya kuvuya ukwenza umsebenzi-ngelixabiso! Kuyinto elungileyo ukutywina ngaphakathi kwitangi lepetroli ngaphambi kokuputywa njengamanye amachiza asetyenziswa kule nkqubo angonakalisa upende.
Akukho mithetho ekhuni nzima kunye noyilo lwe-bobber, kodwa umnini makenze isigqibo sokuqala kwenkqubo afuna ukuyifumana.
Umzekelo, ukuba umninimnqweno unqwenela ukwenza i-bike yakhe kwaye ayinaso injongo yokuyithengisa kamva, unqunyelwe kuphela ngcamango yakhe kunye nemithetho enxulumene nezithuthi apho ehlala khona. Nangona kunjalo, ingqwalasela ebaluleke kakhulu kufuneka ibe yimiba yokhuseleko yesithuthuthu.
Ukuguqula isithuthuthu isisenokuba nefuthe elikhuselekileyo lokukhusela. Umnini okanye umkhwele kufuneka afune iingcebiso zeengcali ngaphambi kokuba aqhubeke nayiphi na inguqu kwibhayisiki yesitokisi.
Ukubuyiselwa kwexesha lokuQala kweSithuthuthu
Ukubuyisela iSyilinda yeSithuthuthu
Ukubeka Ukutshabalalisa Kwezithuthuthu